प्रधानमन्त्री ओली अस्पताल भर्ना, फोक्सो र पिसावमा समस्या - Birat Sandesh
प्रधानमन्त्री ओली अस्पताल भर्ना, फोक्सो र पिसावमा समस्या
बुधबार, कार्तिक १३, २०७६ मा प्रकाशित
स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि ग्राण्डी अस्पतालमा उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोक्सो र पिसावमा समस्या देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक टोलीका एक सदस्यका अनुसार उनको फोक्सोमा पानी जमेको छ भने पिसाव फेर्न समस्या देखिएको छ। ‘प्रधानमन्त्रीको फोक्सोमा थोरै पानी जमेको एक्सरे रिपोर्टमा देखिएको छ, पिसाव गर्न पनि केही अप्ठेरो भएपछि अस्पतालमै राखेर उपचार गराइने छ’, प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक टोलीका एक जना सदस्यले भने। बुधबार दिनभर प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे औपचारिक जानकारी नदिइएपनि साँझ सामान्य रहेको र चाँडै डिस्चार्ज हुने बताइएको थियो। ग्राण्डी अस्पतालका चिकित्सकहरूले औपचारिक विज्ञप्तीमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको र भोलीसम्ममा डिस्चार्ज हुने बताएका छन्। बुधबार साँझ प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएकी डा. दिव्या सिंह शाह र ग्राण्डी अस्पतालका मेडिकल निर्देशक डा. चक्रराज पाण्डेले ‘प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सामान्य रहेको र आवश्यक परीक्षणहरू पूरा भएपछि आज राती वा भोलीसम्म डिस्चार्ज हुने’ बताएका छन्। १२ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएपछि स्वदेशी र विदेशी अस्पतालमा ओलीको बारम्बार स्वास्थ्य परिक्षण हुँदै आएको छ। ओलीलाई बिहान नियमित परीक्षणका लागि ग्राण्डी अस्पताल लगिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको थियो।
बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले पनि आज डिस्चार्ज हुने सम्भावना कम रहेको बताएका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिकित्सकहरूले नै ब्रिफ गर्नुहुन्छ, तर आज डिस्चार्ज हुने सम्भावना कम छ’, अर्यालले नेपालखबरसँग भनेका थिए।
त्यसलगत्तै चिकित्सकहरूको विज्ञप्ती आएको हो। ‘हामीले आज गरेका परीक्षणका रिपोर्टहरु अलि ढिलो आएका छन्, एक्सरे रिपोर्टमा फोक्सोमा थोरै पानी जमेको देखियो भने प्रधानमन्त्रीको पिसाव जाँच गर्दा राम्ररी पिसाव हुन सकेको छैन’, ती सदस्यले भने, ‘अस्पतालमै राखेर औषधी खुवाउँदै उपचार गराउँदा सजिलो हुने भएकाले आज नै डिस्चार्ज हुने अवस्था छैन।’ नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुधबार बिहान ग्राण्डी अस्पतालको आइसीयुमा राखेर विभिन्न परीक्षण गराइएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई भदौ ५ गते सिंगापुर लगेर दुई साता अस्पतालमा राखेर प्लाज्माफेरेसिस गराइएको थियो। ओली भदौ २० गते स्वदेश फर्किएका थिए।